Iindaba - Ngaba i-WPC decking ingapeyintwa?
Ukuhonjiswa kweWPC mfutshane iplastiki yeplanga kunye nokuhonjiswa okudityanisiweyo, ithandwa ngakumbi kwihlabathi liphela.Xa sichaza ukuhonjiswa okudityanisiweyo, sihlala sisithi ukuhonjiswa kwe-WPC akukho mzobo, akukho glu, ulondolozo olusezantsi.Ngoko mhlawumbi umntu angabhida ukuba iibhodi ze-WPC zipeyintwe? , Ungapeyinta njani ukuhonjiswa kwangaphandle kwe-WPC?
Ewe sinako ukupeyinta ukuhonjiswa okudityanisiweyo, kunokuba kunjalo nangomnye umthi onzima. Ngamanye amaxesha sifuna omnye umbala okanye ukuhonjiswa kwakho okudibeneyo kubonisa ukungabikho, emva koko mhlawumbi lixesha lokuthatha imicimbi ezandleni zakho. Ukupeyinta kunye nezinye izixhobo eziyimfuneko WPC decking engaphandle.
Okokuqala: Susa okanye ugqume izityalo Ukuba unehlathi kwiibhodi zokuhombisa ze-WPC, kuyakufuneka ugqume onke amahlamvu ngelaphu okanye amalaphu awayo eplastiki okanye ususe WPC nokwadala.
Okwesibini: Coca i-deck. Ezinye iibhodi ze-WPC zisebenzisa ubuqu bakho, unokucoca ngokulula i-WPC decking yakho njengoko ulungiselela ukupeyinta.Ukucola okusisiseko kunye nokucoca ukungcola, sebenzisa umxube wamanzi anesepha kunye nokucoca umbane ophantsi okanye ibrashi ethambileyo. Ngokususa ukungunda kunye nokuvunda, uya kufuna ukuxuba iinxalenye ezimbini zeviniga kunye nenxalenye enye yamanzi ebhakedeni, uhlambe ngokucacileyo kwaye wome.
Okwesithathu: Isandula ipakethe yakho edityanisiweyo kwaye uyihambise.Ukuze usebenzise isambatho esicocekileyo sepeyinti, unokuyinyanzela i-WPC yakho yokuhombisa iinkuni ukuya kwicala lokudla okuziinkozo ukuze ulahle kwaye ucoce iibhodi zokuhombisa. Umtshayelo kwaye uhlambe ngamanzi kwakhona.Khetha i-acrylic latex yangaphandle kwaye uthele ibhakethi kwitreyi yakho.
Okwesine: Paint yakho WPC decking engaphandleXa i-primer i-100% yomile, ungagalela
Ipeyinti yakho yeveranda yangaphandle kwitreyi yokugaya kwaye uye emsebenzini.Ngokunye, qiniseka ukuba isicelo sokuqala somile ngokupheleleyo ngaphambi kokuba ungeze idyasi yesibini.Amaxesha okomileyo ahlukile.so kuya kufuneka ujonge ileyibhile yemveliso ngamaxesha acetyiswayo okufaka idyasi.
Ukongeza, ngowuphi umbala owufunayo, ulungiselela nje ukupeyinta kuqala.Themba unokuba nobomi obungaphezulu bendalo kunye neemveliso zeWPC.
ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking umgangatho, WPC nokwadala, WPC decking ngaphandle,